“Waxaan la yaabaa sababta uu Gareth Bale wali ula joogo Real Madrid!” – Dimitar Berbatov – Gool FM
“Waxaan la yaabaa sababta uu Gareth Bale wali ula joogo Real Madrid!” – Dimitar Berbatov
(Madrid) 20 Juun 2020. Xiddigii hore ee kooxda Tottenham Hotspur, Dimitar Berbatov ayaa sheegay inuusan wali fahmin sababta ay taageerayaasha Real Madrid mar walba ugu orriyaan xiddigooda Gareth Bale iyo waxa sababay inuu wali la sii joogo Los Blancos.
Bale oo ay hore ugu soo ciyaaray isla Tottenham ayaa muddooyinkii u dambeeyay Real Madrid ka noqday xiddig aan ahmiyad badan u lahayn, isagoo ka baxay doorashada koowaad ee Macallin Zinedine Zidane.
“Gareth Bale wali ma uusan helin waqti ku filan” ayuu Berbatov u qoray Betfair.
“In lagu ciyaaro garoommo albaabo xiran way caawin doontaa isaga iyo kalsoonidiisa, balse waxaan qiyaasayaa wali inayn ku orrinayaan iyagoo TV-ga ka daawanayo.
“Wali ma aanan garan sababta taageerayaasha Real Madrid ay ugu orriyaan ciyaartoydooda, waxayna ila tahay in taageerayaasha si shaqsi ah ay u beegsadaan Bale in ka badan xiddigaha kale.
“Wax walba oo uu sameeyo, xitaa hadduu shan gool u dhaliyo, waxay u abuurayaan waxay ku dhaliilaan.
“Waxaan badanaa la yaabaa, iyagoo sidaas ula dhaqmaya, muxuu wali ula sii joogaa” ayuu yiri weeraryahankii hore ee Manchester United.
39-jirka reer Bulgaria ayaa sidoo kale aaminsan inay jiraan arrin uu laacibka reer Wales ku doortay inuu halkaas sii joogo, balse wax walba uu u sameeyo Madrid, mar walba uu la kulmi doono far isaga ku godan.
Shaxda rasmiga ah kulanka Brighton iyo Arsenal ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay